Global Voices teny Malagasy » Maraoka : Sida, vola, kilalaom-pilàna ara-nofo · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 03 Septambra 2020 10:43 GMT 1	 · Mpanoratra Hisham Almiraat Nandika (fr) i Claire Ulrich, avylavitra
Sokajy: Maraoka, Fahasalamàna, Fivavahana, Mediam-bahoaka, Politika
Tsy dia voadonan'ny VIH loatra raha i Maraoka, raha ampitahaina amin'ireo firenena afrikàna hafa. Araka ireo tarehimarika ofisialy, nanomboka tamin'ny andiantaona 80 nahitàna ilay valanaretina, 2.800 ireo Maraokàna no nahitàna soritr'io aretina io, 22.300 ireo efa tena voa sy miaina miaraka amin'ilay otrikaretina. Ny 25 Aprily, nisy andro iray natokan'ny firenena ho fampahafantarana sy fitiliana  ny VIH/sida.
Gay-Maroc-Musul , bilaogy iray natokana hibanjinana ny olan'ireo pelaka ao Maraoka, no mampahatsiahy antsika ny habetsahan'ny vola mihodina ao. Manazava izy fa ny 22 Aprily dia nihaona tamin'ny minisitry ny raharaha ivelany frantsay Bernard Kouchner ireo ONG, isan'izany ny fikambanana lehibe ao Maraoka miady amin'ny sida ALCS , mba hangataka vola fanampiny misimisy kokoa avy amin'ny Tahirimbola Erantany hiadiana amin'ny sida, ny raboka ary ny malarià . Nandiso fanantenana azy ireo ny valinteny avy amin'ny minisitra :
Any amin'ireo firenena marobe, ary indrindra fa ireo fatra-pifikitra amin'ny nentindrazany, ny fahatongavan'ny valanaretina VIH/sida dia tena nanova tanteraka ny fomba fijery ny resaka firaisana ara-nofo, izay efa fady hatry ny ela ny firesahana azy. Raha toa ny fiarahamonina maraokàna manandrana mitady izay fomba tena mahomby hiadiana amin'ilay valanaretina, ny adihevitra ety anaty tambajotra eny anivon'ny tontolon'ny bilaogy kosa lasa miha-misokatra ary dia ahitantsika mariky ny “fahalalahan-tsaina”, araka izay mety hiantsoan'ny sasany azy. Ho an'i Vanessa Pellegrin , mpanao gazety monina ao Casablanca ary manoratra ao amin'ilay bilaogy iraisana Casawaves :
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2020/09/03/149553/
 nisy andro iray natokan'ny firenena ho fampahafantarana sy fitiliana: http://www.alcsmaroc.ma/public/index.php?option=com_content&view=article&id=109:3eme-edition-de-la-journee-nationale-de-depistage-du-vih&catid=36:test-de-depistage
 Tahirimbola Erantany hiadiana amin'ny sida, ny raboka ary ny malarià: http://www.theglobalfund.org/fr/?lang=fr